Isaya 45 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
45 Utsho uYehova kothanjisiweyo wakhe,+ kuKoreshi, osandla sakhe sokunene ndisibambileyo,+ ukuze ndoyise iintlanga phambi kwakhe,+ khon’ ukuze ndikhulule kwanemibhinqo ezinqeni zookumkani; ukuze ndivule phambi kwakhe iingcango ezivulwa ngambini, khon’ ukuze namasango angavalwa, ukuthi:
2 “Ndiya kuhamba phambi kwakho,+ neendawo ezithe fuku emhlabeni ndiya kuzityeneneza.+ Iingcango zobhedu ndiya kuziqhekeza, nemivalo yentsimbi ndiya kuyinqumla.+
3 Kwaye ndiya kukunika ubuncwane+ ebumnyameni nobuncwane obufihliweyo kwiindawo ezifihlakeleyo, ukuze wazi ukuba ndinguYehova, Lowo ukubize ngegama lakho,+ uTHIXO kaSirayeli.
4 Ngenxa yomkhonzi wam uYakobi noSirayeli lowo unyuliweyo wam,+ ndakubiza ngegama lakho; ndakunika igama lembeko, nangona wawungandazi.+
5 NdinguYehova, akakho omnye.+ Ngaphandle kwam akukho Thixo.+ Ndiya kukubhinqisa ngokuqinileyo, nangona ungandazanga,
6 ukuze abantu bazi ukususela ekuphumeni kwelanga nasekutshoneni kwalo ukuba akukho namnye ngaphandle kwam.+ NdinguYehova, akakho omnye.+
7 Ndiyila ukukhanya+ yaye ndidala ubumnyama,+ ndenza uxolo+ kwaye ndidala intlekele,+ mna, Yehova, ndenza zonke ezi zinto.+
8 “Owu nina mazulu, thontsizani phezulu;+ yaye izibhakabhaka ezinamafu mazithontsize ubulungisa.+ Umhlaba mawuvuleke, ube nesiqhamo esilusindiso, uze kwangaxeshanye untshule+ ubulungisa. Mna, Yehova, ndikudalile oko.”+
9 Yeha ke lowo usukuzene noMyili wakhe,+ njengeceba lengqayi namanye amaceba eengqayi zodongwe! Lungatsho na udongwe+ kumbumbi walo ukuthi: “Wenza ntoni na?” Noko ukufezileyo ukuthi: “Akanazandla”?
10 Yeha ke lowo uthi kuyise: “Uzele ntoni na?” nasemfazini athi: “Unanimba yantoni na?”+
11 Utsho uYehova, Lowo Ungcwele kaSirayeli+ noMyili wakhe,+ ukuthi: “Ndibuzeni nangezinto ezizayo+ ngokuphathelele oonyana bam;+ yaye nifanele nindiyalele ngokuphathelele umsebenzi+ wezandla zam.
12 Ndim owenza umhlaba,+ ndadala nomntu okuwo.+ Ngezandla zam ndawaneka amazulu,+ ndawuyalela wonke nomkhosi wawo.”+
13 “Mna ndivuse uthile ngobulungisa,+ yaye zonke iindlela zakhe ndiya kuzityeneneza.+ Nguye oya kusakha isixeko sam,+ nabam abasekuthinjweni uya kubayeka bahambe,+ kungekhona ngexabiso+ nangokunyotywa,” utsho uYehova wemikhosi.
14 Utsho uYehova ukuthi: “Abasebenzi abangahlawulwayo baseYiputa+ nabarhwebi baseTiyopiya namaShebha,+ amadoda amade,+ baya kuza kuwe, babe ngabakho.+ Baya kuhamba emva kwakho; baya kuza besemakhamandeleni,+ baqubude kuwe.+ Baya kuthandaza kuwe, besithi, ‘Eneneni uThixo umanyene nawe,+ yaye akakho omnye; akakho omnye uThixo.’”+
15 Ngokwenene unguThixo ozifihlayo,+ uTHIXO kaSirayeli, uMsindisi.+
16 Ngokuqinisekileyo baya kuba neentloni bade bathotywe,+ bebonke. Kuya kufuneka bahambe bethotyiwe xa bebonke abenzi bezithixo.
17 Ke yena uSirayeli, ngokuqinisekileyo uya kusindiswa emanyene noYehova+ ngosindiso lwamaxesha angenammiselo.+ Aniyi kuba naziintloni,+ ningayi kuthotywa+ ukusa kumaxesha angenammiselo kanaphakade.
18 Ke uYehova, uMdali wamazulu,+ uTHIXO oyinyaniso,+ uMyili womhlaba noMenzi wawo,+ owuzinzise ngokuqinileyo,+ nongawudalelanga ilize, kodwa owawubumba ukuba umiwe,+ utsho ukuthi: “NdinguYehova, akakho omnye.+
19 Andithethanga emfihlekweni,+ endaweni emnyama yomhlaba; ndingatshongo nakwimbewu kaYakobi ukuthi, ‘Ndifuneni ngokulilize.’+ NdinguYehova, ndithetha oko kububulungisa, ndixela oko kuthe tye.+
20 “Qokelelanani, nize.+ Sondelani ndawonye, nina babalekileyo ezintlangeni.+ Abo bathwala umthi womfanekiso wabo oqingqiweyo abanalwazi, ngokunjalo nabo bathandaza kuthixo ongenako ukusindisa.+
21 Nikelani ingxelo yenu nize nibonise.+ Ewe, mababhunge ndawonye bemanyene. Ngubani na owavakalisa oku ukususela kwixesha lakudala?+ Ngubani na owakuxelelayo ukususela kanye kwelo xesha?+ Asindim na, mna Yehova, ekungekho Thixo ungomnye ngaphandle kwam;+ uThixo olilungisa noMsindisi,+ ekubeni engekho omnye ngaphandle kwam?+
22 “Phethukelani kum nize nisindiswe,+ nonke nina baseziphelweni zomhlaba; kuba ndinguThixo, akakho omnye.+
23 Ndizifungile+—kuphume ilizwi emlonyeni wam ngobulungisa,+ kangangokuba aliyi kubuya+—ukuba onke amadolo aya kugoba kum,+ zonke iilwimi ziya kufunga,+
24 zisithi, ‘Ngokuqinisekileyo kuYehova bubulungisa obupheleleyo namandla.+ Bonke abo bavuthayo ngumsindo nxamnye naye baya kuza ngqo kuye baze babe neentloni.+
25 Ngenxa kaYehova yonke imbewu+ kaSirayeli iya kungqineka ilungile+ kwaye iya kuqhayisa ngaye.’”+